Sida loo rogo ama Guba iyo iPad Video inay DVD
> Resource > iPad > Sida loo rogo ama Guba iyo iPad Video inay DVD
Ma doonaysaa in ay gubaan iPad clips gaaban, sawiro si DVD in aad haysato ama la qaybiyo si fudud? Waa adag tahay in aan haddii aad leedahay xirfad leh iyo fududahay in la isticmaalo software gaare DVD sida Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ). Barnaamijkan wuxuu ka gubtay iPad video inay DVD leh tayo wanaagsan leh iyo xawaaraha ultrafast. Oo ugu wanaagsan oo dhan, waxay ku siinaysaa taageero awood leh in dhammaan qaabab warbaahinta halkaas, iPad SD ama HD MPEG-4, videos H.264 yihiin hubaal taageeray. Sidaas darteed, wax aad isticmaalayso iPad, iPad 2, New iPad, iPad 4 ama xataa iPad mini ugu dambeeyay, waxa kaliya fud si aad u hesho ipad video inay DVD ku qasabno yar. Hel version ah maxkamad si xor ah u la kulmaan ka kaaftoomi iPad video si xor ah u DVD diinta hadda.
Qeybta 1: Transfer iPad video inay Mac ama PC
Qeybta 2: tallaabooyinka Easy in ay Guba iPad video inay DVD
Sida aad ogtahay, aad leedahay si ay u gudbiyaan video iPad ah si aad u computer ugu horeysay ka hor inta iyaga buring in DVD. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa tan smart qalab, u TunesGo Wondershare (Win) ama TunesGo Wondershare (Mac) . Waxa uu xalinayo dhibaatada video iyo waxyaalaha kale ee wareejinta ka computer in qalab aad iyo dib u computer u gurmad ama waxyaabo kale.
Just xiriiriyaan iPad in computer iyadoo la isticmaalayo cable USB. Halkan waa tallaabooyinka marka aad isticmaasho version Mac ah. Marka iPad muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose, guji Videos bidixda. In khaanadda saxda ah, doortaan nooca video ah, Movies , tusaale ahaan, oo guji si ay u galaan suuqa kala managemnet ay. Markaas, guji dar . In file suuqa kala pop-up browser, taga oo soo daydaya filimada sida aad doonayso inaad guji Open in ay dajiyaan them.That waa! Download ay maxkamad lacag la'aan ah halkan:
Fiiro Gaar ah: Iyada oo version Windows ah, kaliya aad u baahan tahay inaad guji Media on column ka tagay. Dooro nooca video ah, sida Movies . Markaas, furmo filimka, guji saddexagalka hoos Add in filimada ama folder movie daro in aad iPad.
Free download iPad DVD gubi. Barnaamijkan waxa cross-madal, kaliya download sida xaaladdaada. Hoos hage qaadataa shaashada Windows. Talaabooyinkaasi waxay ku gubi iPad video inay DVD ee Mac waa isku mid.
1 dejinta ipad videos aad
Riix ah "Import" button ama si fudud u jiidi jeedi video iPad xagga daaqaddii barnaamijka ay. Marka aad ku shuban oo dhan clips, image files, doonaa, waxay ku tusi doonaa sida thumbnails dhanka bidix.
2 Edit ipad videos (optional)
Tani Converter iPad DVD bixisaa diyaar u ah inay isticmaalaan qalabka tafatirka si kor videos istareexsan. Just guji icon qalin inuu u muujiyo suuqa kala edit ah, waxaad ka heli doontaa dhammaan itusi caadiga ah ayaa ku jira: falinjeeerka, qoqobada, lana siii, deinterlacing, qabsato dhalaalka, saamayn, iyo in ka badan.
Haddii loo baahdo, waxa kale oo aad sameyn kartaa DVD menu caadadiisu dhigo mid aad u gaar ah. Riix tab Menu, waxaad dooran kartaa qaab menu jecel ka 50 + arrimo ka dibna sii astaysto. Talooyin: Waxaad riix kartaa fallaadhiina waxay ka cagaaran inaad kala soo baxdo arrimo dheeraad ah oo lacag la'aan ah .
3 Start iPad video inay DVD gubashadii
Geli disk maran sida D5 ama D9 in DVD drive aad. Tani waa ay ku xiran tahay content faylka. Waxaad ku hubin kartaa hoose ee suuqa kala barnaamijka, waxaa jira baar ku tilmaame waxey.
Hadda riix tab Gubashada si ay u dejiyaan aad heerka TV, muuqa, xawaaraha gubanaya ka dibna ku dhuftay Guba ka furmkidoona iPad video inay DVD diinta. Marka aad dhamaysid, disc DVD ee tuurid si toos ah. ( Fiiro gaar ah: ciyaartoyda DVD ee Ameerika, Japan, Korea iyo meelo kale wuxuu qaadanayaa qaab NTSC ah, halka heesaaga ku badan dalalka Yurub iyo Africa.)
Download Free iPad in DVD Converter:
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in iPad